AIA Myanmar, AYA SOMPO နှင့် AYA ဘဏ်တို့မှ Grab Myanmar နှင့် ပူးပေါင်း၍ COVID-19 ကာလအတွင်း ရန်ကုန်အငှားယာဉ် ၁,၀၀၀ ကို ပိုးသတ်သန့်စင်မည်။ - Amazing Yangon
Home /Featured/AIA Myanmar, AYA SOMPO နှင့် AYA ဘဏ်တို့မှ Grab Myanmar နှင့် ပူးပေါင်း၍ COVID-19 ကာလအတွင်း ရန်ကုန်အငှားယာဉ် ၁,၀၀၀ ကို ပိုးသတ်သန့်စင်မည်။
“အားလုံးနှင့်အတူတကွ အနာဂတ်ဟာ စိတ်ချရ” ဟူသောကတိစကား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှ အငှားယာဉ်မောင်းများနှင့် ခရီးသည်များကို ကာကွယ်ရန် အတွက် AYA SOMPO, AYA ဘဏ် နှင့် AIA Myanmar တို့မှ Grab Myanmar နှင့် ပူးပေါင်း၍ အငှားယာဉ် အစီးရေ ၁,၀၀၀ အား ပိုးသတ်သန့်စင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပြည်သူအများ စိုးရိမ်သောက ကင်းရှင်းပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ခရီးသွားလာနိုင်ရေးကို ရည်ရွယ်၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ (၂၄) ရက်မှ စတင်၍ တစ်လအတွင်း တာမွေ၊ ရန်ကင်း၊ လှိုင် နှင့် တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်များရှိ ICAR Auto Service Center (၆) ခုတွင် အထူး သန့်စင်ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာများ၊ ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့်ပေးထားသော ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူ Grab အငှားယာဉ်များကို ပိုးသတ်သန့်စင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ကနဦးခြေလှမ်းအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့တွင် AIA Myanmar မှ အငှားယာဉ် (၅၀၀) အား ပိုးသတ်သန့်စင် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကာ AYA SOMPO နှင့် AYA ဘဏ်တို့မှ အခြား အငှားယာဉ် (၅၀၀) အား ပိုးသတ်သန့်စင် ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
COVID 19 ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲရခြင်းနှင့် အိမ်ထဲတွင်သာ နေထိုင်ရခြင်း စသည်တို့အပြင် လူအများ၊ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများသည် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နေ့စဉ် အပြင်ထွက် သွားလာရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းအတွက် အားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုသည် အဆိုပါ ပြည်သူများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ယာဉ်မောင်းသူများကြား ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးရန် အထောက်အပံ့တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်မည် ဖြစ်သလို ယာဉ်အတွင်း သန့်ရှင်းမှုအဆင့်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
“AYA SOMPO, AYA ဘဏ် နဲ့ Grab Myanmar တို့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး COVID-19 ကာလအတွင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်သူတွေ အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းရေးအတွက် ကူညီပေးနိုင်ဖို့ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါပြီ။ လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ တက္ကစီတွေနဲ့ ခရီးသွားတဲ့အခါ သူတို့တွေ ဘေးကင်းဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကြောင့် စိုးရိမ်သောကတွေ ကင်းသွားရမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ မြို့ကြီး ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေဖို့ အဓိကဖြစ်တဲ့ အများပြည်သူ ခရီးသွားတွေအတွက်ရော၊ ယာဉ်မောင်းသူတွေအတွက်ပါ အကျိုးရှိစေတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ “ပိုမိုကျန်းမာအသက်ရှည်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်” ဆိုတဲ့ ကတိစကားအတိုင်း ဒီကာလမှာ မြန်မာပြည်သူတွေကို ကူညီဖို့ အမြဲအသင့်ရှိနေသလို အုတ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်အနေနဲ့ ပါဝင်လှုပ်ရှားဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခု ရရှိခဲ့တာကိုလည်း အများကြီး ကျေနပ်ဝမ်းသာရပါတယ်။” ဟု AIA Myanmar ၏ CEO ဖြစ်သူ Mr. Luc Ly က ဆိုသည်။
Grab Myanmar ၏ Country Head ဖြစ်သူ Ms. Cindy Toh မှ “AIA Myanmar, AYA ဘဏ် နဲ့ AYA SOMPO တို့ ပူးပေါင်းပြီး Grab App နဲ့ လက်တွဲနေတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေ၊ နေ့စဉ် ခရီးသည်တွေနဲ့ မြို့တော်ရဲ့ လူထုတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ Grab တက္ကစီ ၁,၀၀၀ ကို ပိုးသတ်သန့်စင်ပေးမယ့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ဖော်ဆောင်လိုက်တာ အများကြီး ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ ဒီ အစီအစဉ်အပြင်ကို Grab ယာဉ်မောင်းတွေ အနေနဲ့ ယာဉ်တွေကို အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းအောင်ထားဖို့၊ ယာဉ်ပေါ်မှာ အမြဲတမ်းလိုလို ထိတွေ့နေရတဲ့ နေရာတွေကို အမြဲ ပိုးသတ်သန့်စင်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းထဲမှာ ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ဒီယာဉ်မောင်းတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်မတို့အတွက်လည်း အရေးကြီးသလို ဒီလှုပ်ရှားမှုကနေတစ်ဆင့် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ Grab တက္ကစီတွေကို နေ့စဉ်စီးနင်းရာမှာ ယုံကြည်စိတ်ချမှု ပိုရှိလာစေဖို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။” ဟု ဆိုသည်။
AIA သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌ ၎င်းတို့၏ လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ထိုလှုပ်ရှားမှုများ မှတစ်ဆင့် ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်နိုင်ရေးတို့အား တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှာ အထောက်အကူပြုလျက်ရှိသည်။ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ်၏ ကလပ်တစ်ခုဖြစ်သော Tottenham Hotspur မှ နည်းပြများကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်၍ ကလေးငယ်များကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော AIA KICK! နှင့် AIA GOAL! ကို စီစဉ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ AIA သည် ၎င်း၏ နှစ်တစ်ရာပြည့် အခမ်းအနားအဖြစ် AIA GO! FOR LIGHT ၅ ကီလိုမီတာ ပရဟိတ ပြေးပွဲကို ပုဂံတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ပုဂံဒေသမှ အိမ်ခြေ (၁၀၀) အတွက် ဆိုလာပြား (၁၀၀) ကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။ လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများအကြောင်းနှင့် အခြားသော အချက်အလက်များကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက AIA Myanmar ၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာဖြစ်သော https://www.facebook.com/AIA.Myanmar.MM/ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။